Muxuu ka yiri Mikel Arteta guushii ay xalay Arsenal ka gaartay kooxda Brighton?? – Gool FM
Muxuu ka yiri Mikel Arteta guushii ay xalay Arsenal ka gaartay kooxda Brighton??
(London) 30 Dis 2020. Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay guusha muhiimka ah oo ay Gunners ka gaartay kooxda Brighton & Hove Albion.
Arsenal ayaa guul ka soo heshay kooxda Brighton & Hove Albion oo ay ku booqatay garoonka The American Express Community, kaddib markii ay kaga soo adkaadeen 0-1, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Ingiriiska.
Mikel Arteta ayaa ciyaarta kaddib la hadlay warbaahinta wuxuuna yiri:
“Waxaan ogeyn inaan u baahanahay inaan gaarno guul, waxa ina soo maray todobaad adag, mana ahayn mid la xiriira waxqabadka laakiin natiijooyinka, laakiin waxaad u baahan tahay natiijooyin si loo gaaro kalsooni.”
“Waxaan rajaynayaa in aan baxno oo aan helno natiijooyin taxane ah oo wanaagsan, si aan u noqonno kuwa wanaagsan.”
Arteta ayaa intaas kaddib ka hadlay goolkii uu dhaliyay Lacazette kaddib baaskii cajiibka ahaa ee uu sameeyay Bukayo Saka, wuxuuna yiri:
“Waxaan u malaynayaa in taasi ay ahayd dhaqaaq aad u wanaagsan oo uu sameeyay Bukayo si uu u abuuro falkii uu sameeyay.”
“Wuxuu ahaa gool cajiib ah, Lacazette aad ayuu u fiicnaa kaddib dhaqaaqii uu sameeyay, si uu u sameeyo, boos qaadasho, taabasho, iyo inuu ciyaarta soo gabagabeeyo.”
Si kastaba ha noqotee, guushaan ay gaartay Arsenal ayaa ka caawisay inay sare ugu soo kacdo 20 dhibcood, taasoo ka dhigtay inay soo fariistaan kaalinta 13-aad ee dhanka miiska kala sareynta horyaalka Premier League.
Horudhac: Elche vs Real Madrid… (Los Blancos oo doonaysa inay sii wadato guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka La Liga)
Koeman oo sharraxay sababta ay Barcelona barbaraha ula gashay kooxda Eibar